Molenbeek, Zavamisy Mifaningotsingotra Ao Amin’ny Fiarahamonina Vasohan’ny Media · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Linds Mulholland
Voadika ny 25 Novambra 2015 5:28 GMT
Afisy nozaraina nandritra ny fihetsiketsehana “Molenbeek mampitaratra hazavana”, fanomezam-boninahitra ireo niharam-boina tamin'ny fanafihana tao Parisy, notontosaina tamin'ny 18 Novambra tao amin'ny kianja malalaka ao Molenbeek. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Miatrika ireo mahery fihetsika ankavanana rehetra, miady amin'ny fisaraham-bazana rehetra sy ny ady rehetra, ho an'ireo niharam-boina rehetra tamin'ny baomba manerana izao tontolo izao, hatrao Parisy ka hatrao Aleppo, mandalo an'i Beirota sy i Ankara, izahay mponin'i Molenbeek sy ny kaominina rehetra eto Bruxelles, manao antso izahay hitsipahana ny tahotra sy ny fisaraham-bazana, ary hankalaza ny firaisantsaina sy firaisankina ho an'ny tontolo anjakan'ny rariny sy ny fitoviana.
Izany no hafatra hoventesin'ny “Diabe hoan'ireo niharam-boina, manohitra ny ady rehetra, manohana ny firaisankina ary manohitra ny fisaratsarahana”, izay hotontosaina amin'ny 25 Novambra ao Molenbeek. Nipoitra matetika tamin'ny fampahalalam-baovao manerantany ity kaominina Belza iray ity hatramin'ny fanafihana tao Parisy tamin'ny 13 Novambra, ary tsy vao voalohany ny anarana Molenbeek no nipoitra noho ny fisian'ireo fanafihana isan-karazany ataon'ny milisy jihadista manodidina an'i Eoropa.
Namoaka sary mampikorontan-tsaina hatrany momba ny kaominina ny fampahalalam-baovao, izay tsipahin'ny mponina. Tamin'ny 18 Novambra, olona tokony ho 2.000 no nivorivory tao amin'ny kianja afovoan'i Molenbek mba hanome voninahitra ireo niharam-boina tamin'ny fanafihana tao Parisy sy hampisehoana ny lafiny iray hafa ao amin'ny fiarahamonina izay tsy ny nasehon'ny gazety.
Na izany aza, sarotra tanteraka ny zavamisy ao Molenbeek ary tsy azo lazaina amin'ny famaritana sy marika tsotsotra.
Iray amin'ireo monisipalite 19 mandrafitra ny Faritry ny Renivohitra Belza ao Bruxelles i Molenbeek-Saint-Jean, izay misy ny foiben'ny Vaomiera Eoropeana, ny Filankevitry ny Vondrona Eoropeana, ny Parlemanta Eoropeana, ary ny OTAN. Latsaky ny adiny roa miala ao Paris amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha Thalys i Bruxelles, ary adiny ora miala ao London ihany koa amin'ny alalan'ny Eurostar izay mamakivaky ny Fantsona Tonelina.
Miorina ao amin'ny faritra andrefan'i Bruxelles, iray amin'ireo faritra ara-toekarena marefo ao Belzika i Molenbeek. Manana mponina manodidina ny 95.000 izy, saingy avo roa heny amin'ny antonony ao an-drenivohitra ny hakitroky ny mponina ao aminy. Ahitana tahan'ny tsy fananan'asa avo indrindra 31%, ihany koa izy, taha izay mihoatra ny 40% eo amin'ny tanora. Teraka tany ivelany kosa ny mponina manodidina ny 25%, ary hita ao avokoa ny zom-pirenena maherin'ny 100. Tombanana ho 40%, kosa ny mponina Silamo ao amin'ny kaominina, faharoa lehibe indrindra ao amin'ny faritr'i Bruxelles, ary misy moskea 20 raha ampitahaina amin'ny fiangonana dimy ho an'ny Kristianina maro an'isa (tarehimarika tamin'ny 2013).
Ao anatin'ny fahasorenan'ny vahoaka amin'ny hoavy manalasala, nametraka ny fanantenany amin'ny mahery fihetsika Silamo Wahhabi ny sasany. Mamatsy vola ny fanorenana moskea ireo firenena heverina fa namana ary mandefa mpitondra fivavahana mitory ny fanazavana henjana indrindra momba ny Sharia. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, fandalovan'ny milisy jihadista maromaro ny kaominina, anisan'izany ireo nandray anjara tamin'ny daroka baomba tao Madrid tamin'ny taona 2004, ny fifampitifirana tao amin'ny Tranombakoka Jiosy ao Bruxelles tamin'ny taona 2014, ny fanafihana ny gazetiboky Charlie Hebdo tamin'ny volana Janoary 2015, ny fanafihana ny fiarandalamby Thalys tamin'ny volana Aogositra ny 2015, ary ny vao haingana indrindra ny fanafihana ny renivohitra Frantsay tamin'ity volana Novambra ity. Voalaza fa Belza maherin'ny 400 no nanatevin-daharana ny Daesh, fantatra amin'ny anarana ISIS ihany koa.
Nilaza ilay mpanao gazety Mario Moratalla avy ao amin'ny vondron-gazety Espaniola VozPópuli fa nanjary ” toerana anjakan'ny fankalahana ara-poko sy ara-kolontsaina takonana amin'ny adin-tsaranga” i Molenbeek-Saint-Jean. Nanazava bebe kokoa ny olan'ny fironana mankany amin'ny “mahery fihetsika” ao anatin'ny kaominina i Françoise Schepmans, ben'ny tanànan'i Molenbeek:
Tao anatin'ny taompolo vitsivitsy lasa, dia natrehi-maso ny fitokana-monina (fihalangalana) ara-piaviana, fitokana-monina noho ny fivavahana. Ary avy eo, manoloana ny zava-nitranga iraisampirenena, dia nanatri-maso ny fondamentalisma nivadika ho radikalisma mahery setra. Tsy mino aho fa nandray fepetra ampy manoloana ity zava-mitranga ity ny manampahefana. Ary ny politisiana tsy niantoka ny fampidirana sy ny fikarakarana ny olona manana fiaviana vahiny. Maro ireo mitoetra ho anjorombalan'ny fiarahamonina.
Molenbeek, Bruxelles. Mpanatrika ny Fetiben'ny Mozika tamin'ny volana Jiona 2008. Sary avy amin'i Lieven Soete tao amin'ny Flickr, licenced CC BY-NC-SA 2.0
Mahatakatra lalina ny zavamisy ao Molenbeek i Johan i Leman, pretra Dominikana, manam-pahaizana momba ny haiolona ara-kolontsaina sady mpampianatra ela nihetezana tao amin'ny Oniversiten'i Leuven. Mikasa hampiditra ny vitsy an'isa ao anatin'ny fiarahamonina ny fikambanana tarihiny, Foyer. Tamin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Guardian, nanamafy am-pahatsorana i Leman fa na eo aza ny endrika ivelany, dia tsy foiben'ny mpanohana ny Daesh velively ny faritra.
Ho an'ny manampahefana, misy lesona roa azo tsoahina: Miasa ho amin'ny hoavin'ny ankizy (manatsara ny fanabeazana), hahitan'ireo zatovo ny hoavin'ny zanak'izy ireo (raha tsy ny hoaviny). Faharoa: maneho fanajana ny mponina. Sorohy ny teny filamatra mora mivoaka toy ny hoe “hanadio izahay.” Atsaharo ny fiheverana olona ho lasa mpamono olona, ​​satria tsy izany izy ireo. Ilainao toy ny ondana malemy ara-piarahamonina miady amin'ireo mpitady djihadista, sy mpivarotra zava-mahadomelina ary mpitory fankahalana ianao.
Manondro ny fanambarana nataon'i Jean Hama, Minisitry ny Atitany Belza, naneho ny fahavononany “hanadio an'i Molenbeek” ora vitsivitsy taorian'ny fanafihana tao Parisy i Leman amin'io voasoratra eo ambony io. Niaiky ny tsy fahombiazan'ireo fepetra natao hiadiana amin'ny mahery fihetsika ihany koa i Jambon taorian'ny fandravana ny vondrona jihadista iray tamin'ny volana Janoary. Tafiditra ao anatin'ireo fepetra ireo ny fampiasana vondro-kery mamantatra izay olona mety hivadika ho maherisetra na hankany Syria.
Molenbeek. Sary tany amin'i Antonio Ponte tao amin'ny Flickr, licensed CC BY-NC-SA 2.0
Na dia izany aza, natao tsirambina tanteraka ny fampahalalam-baovao ho famahana ny olana mbola mianjady amin'i Belzika: ahoana no ampihenan'ny fahombiazan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny hamaroan'ny kipitsopitson-drafitra ara-politikan'i Belzika. Nanamarika izany ny BBC, nanoratra hoe:
Iray amin'ireo zava-tsarotra atrehin'ny governemanta amin'ny fifehezana ny mahery fihetsika ny fetran'ny fahombiazan'ny mpitandro filaminana sy ny sampan-draharaha ara-piarovana. Ahitana firenena mpifanandrina roa lehibe i Belzika: ny Wallon miteny frantsay sy ny Flamand miteny Holandey. Mba hanamaivanana ny fifanenjanana eo amin'ny roa tonta, nomena fahaleovantena bebe kokoa ny governemanta isan-toerana, izay niteraka ambaratongam-birao isan-karazany. Rafitra be olona loatra izay manohintohina ny fahombiazan'ny fivezivezen'ny vaovao eo amin'ny sampam-pitsikilovana sy ny fahafahana hiasa sy hahazo vokatra tsara.
Ankoatra izany, tsy manana vondrona miray loha afaka mifehy ny asan-jiolahy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny sisin-tanin'ny Kaontinanta Eoropeana. Araka ny filazan'i Jean-Charles Brisard, filohan'ny Foibe Frantsay Mpanadihady ny Fampihorohoroana:
[…] Miatrika toe-javatra miantraika amin'ireo firenena Eoropeanina maromaro, fa tsy firenena tsirairay fotsiny isika.
[…] Nandritra ny taona maro no nangataka zavatra maro tamin'ny Vondrona Eoropeana i Frantsa sy ny firenena Eoropeanina hafa hametrahana fepetra hanatsarana sy handrindrana foibem-baovao iray amin'ny alalan'ny Europol, indrindra indrindra, momba ireo jihadista.
Indrisy anefa, raha fiadiana amin'ny fampihorohoroana no resahana, marefo tanteraka i Eoropa hatramin'izao fotoana izao.
17 ora izayAmerika Latina
1 herinandro izayAngletera
3 herinandro izaySoisa